Qaar kamid ah Askartii ka qeyb qaadatay Afgembigii Fashilmay ee dalka Turkiga oo la qabtay (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Ciidamada booliiska dalka Turkiga iyo shacabka dalkaasi ayaa ku guuleestay in ay gacanta ku dhigaan hubkana ka dhigaan qaar kamid ah ciidamada Milatariga oo xalay isku dayay in ay afgambiyaan Dowlada Turkiga.
Waxaa wali kasocda magaalooyinka Ankara iyo Istanbuul howlgalo lagu qab qabanayo saraakiishii iy askarti ka dambeesay Afgembigii fashilmay ee lagu doonayay in xilka looga tuuro Madaxweynaha Shacbiyada badan ee Recep Tayyip Erdogan.
Taageerayaasha Madaxweyne Erdogan ayaa dusha ka fuulay Taangiyadii ay wateen ciidanka Milatariga ee Afgambiga doonayay, waxa ayna shacabkan si toos ah gacmaha ula tageen soona xireen qaar kamid ah askartii afgembiga ka qeyb qaadaneysay.
In ka badan 60-qf oo isugu jira Shacab iyo ciidan ayaa ku dhintay Afgembiga fashilmay ee ka dhacay dalka Turkiga, waxaa sidoo kale jira dad badan oo ku dhaawcamay, Taliyihii ciidanka Milatariga ayaan wali la heyn warkiisa iyadoona soo baxaaan warar sheeaya in la afduubtay.
Ra’isul Wasaaraha Turkiga ayaa sheegay in la xiray dad ka badan 100-qof oo kamid ahaa dadkii ku lugta lahaa afgembigii fashilmay ee ka dhacay dalka Turkiga, waxa uuna shaaciyay R/Wasaaraha in ciqaab adag mudan doonaan dadkii ku lugta lahaa afgembigaasi.